Uhlelo lokukhetha luyingxenye ebalulekile yimuphi umbuso wezepolitiki. Ibeka imithetho yokudala imizimba kahulumeni kanye nokuzivocavoca kuthonya inqubo yokhetho. Ngomqondo obanzi, "uhlelo lokukhetha" luyizinqubo zenhlalo kanye nemithetho ehlobene nokhetho, futhi ngomqondo omncane - indlela yokuqopha amavoti nokusabalaliswa kwezihlalo emzimbeni wamandla kahulumeni phakathi kwabaqokelwe. Yiziphi ukhetho kumongo wesistimu yokhetho? Lesi yisici salo esiyinhloko, esivela kanye nezinye izindlela zokwenza imizimba yamandla (ifa, ukuthunjwa okuphoqelelwe, ukuqokwa kokuthunyelwe).
Sizozama ukunikeza incazelo ecacile yalokho okhethweni. Lena inqubo eqondiswa ngentando yeningi ekukhethweni kanye nokhetho olulandelayo lwabaqokelwe ehhovisi likahulumeni; Inqubo efanayo kwi-stock joint-stock kanye nezinhlangano zomphakathi. Ngaphambi kokhetho lwezombangazwe, izifundo zokuhlaziya kanye nokuhlolwa kombono womphakathi kuyadingeka. Umsebenzi womuntu ozobhalwa nguye ukucacisa "ukhetho" lwakhe. Okubaluleke kakhulu yizifundo ezinikeza umbono wezizathu zamaqembu abavoti abazayo.
E-Russia, yini okhethweni eyaziwa isikhathi eside, ngoba, ngokuphambene nombono ovamile, isiko eside. Ukuphila kwamaphabliki ase-medieval kaNovgorod noPhkov ayelawulwa ukhetho. Sibonga kubo, uBoris Godunov noMikhail Romanov baba yizinhlanzi. Kwaphela amakhulu eminyaka belawula impilo yeCosacks kanye neSonto Lama-Orthodox. Izikhungo zama-zemstvo zekhulu le-19 nazo zazikhethisa: abadala basekhaya nabalimi baqokwa ngumphakathi.
Esikhathini sobuSoviet, ukhetho jikelele lwaba nemibandela, oluhlelekile. Akekho owakhuluma ngalokho okhethweni olugcwele. Kwakungaphansi kweGorbachev ukuthi isimo sashintsha, ukhetho oluzimele kanye nabaphikisi baqala ukuhlanganyela kuzo. Kwakukhona ngisho nomqondo wokhetho lwabaqondisi bezikhungo namabhizinisi. Umsebenzi wezepolitiki wabantu uye wanda kakhulu. Izenzakalo zangaphambi kokhetho zenziwa ngendlela ejwayelekile yendabuko, imihlangano nabavoti, ukusakazwa kwe-TV, ukusakazwa kwemisakazo, ukwesekwa kwamaphephandaba nomagazini, ukuhlelwa kweminyango yabantu , njll.
Ukhetho lokuqala eRussia lwaqala ukuhambisana nokukhangisa kwezombusazwe eminyakeni engama-90. Lokhu kwabonakala ikakhulukazi ngesikhathi sokuvota kuka-Ephreli 1993. Ngo - 1996 ukhetho likamongameli , ukuthengiswa kwethelevishini kwasetshenziselwa ukukhangisa kwezombusazwe. Kwakukhona umkhuba wokusebenzisa izinsiza ze-ejensi yokukhangisa eyenza ama-oda amaqembu.
Inkinga yabavoti baseRussia namuhla ukuthi abanayo imikhombandlela ecacile - abaholi abathandekayo. Ngakho-ke, abantu abanandaba futhi ngokuvamile bamane benqabe ukuvota.
Iyini ukhetho lwentando yeningi? Ziqhutshwa ngokuhambisana nalezi zimiso ezilandelayo: eziphoqelekile, ngezikhathi ezithile, jikelele amandla, ukukhetha okuhlukile, amalungelo alinganayo abakhethiweyo, ukugcinwa komthetho, ukukhululwa okukhululekile kwentando yabavoti, iziqinisekiso zokuvota ngasese, ukuveza obala nokuvuleka kokuziphatha.
UMongameli waseMongolia: biography, umlando
Umlobi Boris Zaitsev: Biography, lokusungula
Abantu bakwa Hunza - eyikhulu. Indlela Yokuphila kanye nokudla Hunza abantu
Ezingavamile zobumba imifanekiso ye-USSR (izithombe)